Sii Hayaha Wasiirka Warfaafinta Oo Kormeemray Xarrunta Internetka Fiber Potic Ee Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
A warsame 12 January 2014 4 April 2019
Muqdisho, Mareeg.com: Sii hayaha wasiirka warfaafinta Soomaaliya C/laahi Ciilmooge Xirsi ayaa maanta kormeer ku soo sameeyey xarunta ugu ballaaran ee lagu diyaarinayo Internet-ka Fiber-optic oo ah keydka akhbaarta Soomaaliya oo ay ka socdeen howlo lagu hirgelnayo.
Wasiir Ciilmooge ayaa sheegay in adeega Internet-ka ee Fibe Optic uu diyaar noqon doono bisha soo socota, wuxuuna yiri “Maanta waxaan kormeer ku tegnay garoonka Internet-ka Fiber-optic waxa uu diyaar noqon doono bisha soo socota, haddii uu Alle idmo”.
“Waxaana shirkadaha isgaarsiinta ugu baaqaya inaysan dhaq jalaq u siinin hadallada argagixisada ah oo ay sii labo jibaaraan adeegyada casriga ah ee ay bulshada u hayaan” ayuu sidoo kale yiri Ciilmooge.
C/laahi Ciilmooge Xirsi ayaa dhanka kale kormeeray garoonka diyaaradaha Muqdisho, wuxuuna kulan la qaatay mas’uuliyiinta shirkadda dhismaha iyo maamulka garoonka diyaaraha Muqdisho ee Turkiga ah ee FAVORI, iyadoo kulanka ay ka qeybgaleen maareeyaha iyo maareeye ku-xigeenka garoonka, saraakiil sarre oo ka socday Wasaaradda Warfaafinta.
Kulanka aya looga hadlay dhismaha casriga ah ee Garoonka Muqdisho ka socda iyo sidii loo horumarinta dhammaan adeegga uu u baahan yahay, iyadoo Wasiirka uu warbixinno amuurtaasi ku aaddan ka dhageystay saraakiisha shirkadda FAVORI ee dalka Turkiga.